Nahazo ny lokan’ny Printsin’i Asturias tany Espaina i Quino ilay mpanao tantara an-tsary ‘Mafalda’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2020 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Nederlands, Português, Ελληνικά, Español
Mafalda ao anaty metro ao Buenos Aires. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny mpisera xomorrito. CC BY-SA 2.0
Angamba tsy re firy tany an-kafa ny vaovao momba ny nanolorana an'i Joaquín Salvador Lavado Tejón ny loka Printsin'i Asturias ho an'ny Fifandraisana sy ny Maha-olona tao Espaina. Izany dia satria Quino no hamantarana ilay mpanao sariitatra Arzantiniana fanta-daza 81 taona, ilay lehilahy ao ambadiky ny zazavavy kely Mafalda idealista nefa mahita ny lafy ratsin-javatra.
Nambaran'ny Orina Mpanasoa Printsin'i Asturias ny 21 Mey tany Oviedo, Espaina fa omeny an'i Quino ny loka noho ny famoronany ilay tantara an-tsary Mafalda sy noho ireo sanganasany taty aoriana koa.
Nizara ny mombamomba an'i Quino sy ny tantara an-tsary malaza nataony vitsivitsy ny bilaogy gazetiboky AdriBosch, raha nanambara ny vaovao:
Tonga tamin'ny taona nankalazan'ilay olon'ny tantara an-tsarysariitatra malaza ny faha-50 taonany ity loka manan-daza ity.
Nandritra ny sivy taona no nanaovan'i Quino sary an'i Mafalda, teo anelanelan'ny taona 1964 sy 1973. “Saingy tsy mbola nahay nanao ny sariny mihitsy aho, tsy maintsy naka tahaka ny sariny aho”, hoy izy vao tsy ela akory izay.
Mafalda no sariitatra Amerikana Latina be mpividy indrindra manerantany ary tsy mbola lefy laza mihitsy tao anatin'izay dimampolo taona izay: mbola mitranga hatrany izay olana rehetra (na saika ny olana rehetra) nahatezitra an'ity zazavavy tsy mitovy fisainana amin'ny rehetra ity.
Mandritra izany fotoana izany, niarahaba an'i [es] Quino i Biblioblog FL-UNC :
Miarahaba an'i Quino izahay !!! Notolorana ny loka Printsin'i Asturias. […] Ahitana sary sokitra novolavolain'i Joan Miró sy vola mitentina 50.000 euros [eo amin'ny 68.000 dolara Amerikana] ny loka, miampy diplaoma sy karatra mari-pamantarana.
Nahafantatra ny zava-bitan'i Quino rehetra rehefa nanolotra azy ny loka ny mpitsara ny loka manan-daza Printsin'i Asturias izay noheverina ho loka Nobel ho an'ny kolontsaina amin'ny Espaniôla.
Nilaza ny mpitsara fa “zazavavy mahatsapa ny fahasarotan'izao tontolo izao mijery amin'ny alàlan'ny fahatsoram-pon'ny zaza” i Mafalda. Nofaritana ho “manan-tsaina, mahatsikaiky, tsy mitovy fisainana amin'ny rehetra, mpikomy ary mora tohina izy. Manonofy tontolo iray mendrika kokoa izy, marina sy manaja ny zon'olombelona. ”
Nanonona an'i Quino namaritra an'i Mafalda i Margrafic:
[Izy] dia “zazavavy iray miezaka mamaha ny olana atrehin'ny olona tsara sy ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity”, zavatra izay iombonantsika rehetra ankehitriny. Tena mendrika azy ny loka.
Avy any Espaina, nanontany an'ilay olon'ny sariitatra malaza ny tranonkala La utopía del día a día:
Tsy ho ela dia hizara aminay ny zavatra tsapanao sy ny rainao Quino ianao rehefa nahazo ny loka “Printsin'i Asturias”. Hoy aho hoe…
Tototry ny firariantsoa sy fiarahabana avy hatrany tao amin'ny Twitter taorian'ny nanambarana ny loka, ary mpisera maro no namoaka indray ny sariitatra Mafalda:
Todo lo que salió de un lápiz 🙂 Estamos felices por el Príncipe de Asturias para #Quino http://t.co/eU1gB2PbAg pic.twitter.com/orbUIhf4kR
Nivoaka avy tamin'ny pensilihazo izany rehetra izany. 🙂 Faly be izahay tamin'ny loka Printsin'i Asturias ho an'i Quino.
Quino, mpamorona an'i Mafalda, loka Printsin'i Asturias. Arahabaina!
Claro, que #Quino no es solo Mafalda (aunque con eso hubiera bastado). Aquí, una sobre la crisis y su salida 😉 pic.twitter.com/0EAafau2a6 — Carlos Vázquez (@Carlingas59) Mayo 21, 2014
Mazava ho azy fa tsy i Mafalda fotsiny i Quino (na dia mety efa ampy aza izany). Eto ny iray momba ny krizy sy ny lalan-kivoahana aminy. 😉
Sariitatra Mafalda farany, nivoaka tamin'ny 25 Jona 1973, araka ny fanapaha-kevitr'i Quino.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nahazo ny Légion d'honneur ihany koa i Quino, loka lehibe indrindra any Frantsa, izay toerana ahitana be mpitia ny sanganasany. Nomem-boninahitra tao amin'ny Efitranom-boky tao Paris tamim-pihobiana lehibe ilay mpamorona an'i Mafalda.